Ụlọ ọrụ mkpuchi chocolate, igwe mkpuchi chocolate - igwe LST
Chocolate mkpuchi macin na-eji miri nhazi nke chocolate metụtara ngwaahịa, ọ bụ igwe eji na confectionery ụlọ ọrụ na-eyi ihe nri ihe na mkpuchi mkpuchi, a chocolate, ihe oriri dị ka chocolate mmanya, ahụekere, ike swiiti, Fudge, Almond, mịrị, wdg nwekwara ike iji na ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ iji kechie mkpuchi shuga maka mbadamba na ọgwụ.
Kedu ụdị igwe mkpuchi chocolate
Na update nke nkà na ụzụ, anyị na-anọgide na-ewebata ọgbọ atọ nke mkpuchi igwe, niile nkọwa dị ka ndị a:
Chocolate mkpuchi / polishing igwe igwe bụ igwe teknụzụ ọdịnala na-eji mkpuchi ngwaahịa site na mkpuchi mkpuchi / polishing pan na-agbagharị ọsọ, akụkụ ndị bụ isi bụ mkpuchi / polishing pan na isi moto, ikike mmepụta sitere na 6kg / ogbe ruo 120kg / ogbe. Nke a igwe nwere ike iji maka mkpuchi na polishing chocolates dị iche iche shapes, dị ka gburugburu, oblate, oval, sunflower mkpụrụ ekara, cylindrical wdg, na-eme ka ọ kenkowaputa, na-egbuke egbuke n'elu.Ọzọkwa, chocolate ga-adịkwa nro karị mgbe a na-egbuchasị ya.
Belt chocolate mkpuchi / polishing igwe adabara uwe a dịgasị iche iche nke center na ọchịchịrị ma ọ bụ na-acha ọcha chocolate yana compound.The igwe tumadi eji na stuffed ngwaahịa na ahụekere, almọnd, mịrị, puffed osikapa bọọlụ, jelii candies, ike candies, QQ candies na melissa etc.Ọ bụ a uka mmepụta ngwá maka chocolate metụtara ngwaahịa.
Rotary-drum chocoalte sugar mkpuchi / polishing igwe bụ anyị ọhụrụ R & D technology, ọ ga-eji maka chocolate mkpuchi nke dị iche iche shapes, crispy swiiti mkpuchi, wdg, 360 ° adiana, mma mkpuchi mmetụta, ọtụtụ-eji na nri, ọgwụ na ọgwụ. agha ụlọ ọrụ, ọ bụ a elu-ọgwụgwụ ngwá maka chocolate, ntụ ntụ mkpuchi na polishing nke mbadamba nkume, ọgwụ, swiiti, wdg.
Kedu ka usoro ọrụ Rotary-drum chocoalte sugar mkpuchi/ igwe polishing si arụ ọrụ?
Anyị Rotary-drum chocoalte sugar mkpuchi / polishing igwe zuru akpaka mkpuchi mkpuchi, 360 ° rotation, akpaka ihe loading na ebutu.
Lelee vidiyo anyị na igwe mkpuchi chọkọletị na-arụ ọrụ.
Kedu ihe bụ njirimara Rotary-drum chocoalte sugar mkpuchi/ igwe polishing?
1.Automatic ihe ntinye ihe, nhazi ngwaahịa na nbudata.
2.Automatic sirop ịgba, ntụ ntụ ịgbasa ike uzuzu mwepụ.
3.Automatic ihicha, ihicha na dehumidification.
4.Enclosed ohere, okpomọkụ na iru mmiri controllable, dịghị ofufe.
5.Ọ bụghị oke site na ụdị ngwaahịa, ọ nwere ike kpuchie ngwaahịa nke ụdị dị iche iche.
Kedu ihe eji mkpuchi / igwe na-egbuke egbuke chocolate?
Chocolate mkpuchi / polishing igwe a na-ejikarị na ụlọ ahịa chocolate, ụlọ ahịa ice cream na obere ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Belt na Rotary-drum chocolate mkpuchi / polishing igwe na-eji mmemme ọgbọ iji chịkwaa ogo nke akpaaka, dabara maka nkọwa ngwaahịa dị iche iche, ikike mmepụta buru ibu, ọ bụ ngwaọrụ dị mma iji dochie ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ite polishing, nke a na-ejikarị na nri na ọgwụ. ụlọ ọrụ
Mkpuchi chocolate na pan
Belt-Ụdị Chocolate ntụ ntụ mkpuchi na igwe na-ehicha ihe
Rotary-drum Chocoalte Sugar Powder mkpuchi na igwe na-ehicha ihe